Ogaden News Agency (ONA) – Hogaamiyihii Catalonia oo Spain Ugu Baaqay Wadahal.
Hogaamiyihii Catalonia oo Spain Ugu Baaqay Wadahal.
Posted by ONA Admin	/ April 8, 2018
Maalin kaddib markii laga sii daayay xabsi ku yaalla Jarmalka, hoggaamiyihii hore ee Catalonia Carles Puigdemont, ayaa ugu baaqay Spain in ay bilowdo wada hadal ku aadan xal siyaasadeed oo loo helo xasarada ka taagan Catalonia.
Wuxuu xukuumada Madrid ugu baaqay inay xushmeyso dimuqraadiyada ayna u ogolaato ninka xabsiga ku jira ee Jordi Sanchez in uu madax ka noqdo maamulka Catalonia.
Puigdemont ayaa sheegay in ay tani horseedi karto waa cusub oo wadaxaajood ah. Wuxuu sidoo kale beeniyay inuu isaga soo abaabulay in lagu xiro Jarmalka bishii hore, isagoo sheegay in ay tahay arrin nacasnimo ah.
Waxaa lagu wadaa inuu sii joogo Berlin inta maxkamadaasi Jarmalka ku taala ay ka go`aansaneyso haddii lagu celinayo Spain. Maxkamad ku taala Jarmalka ayaa Carles Puigdemont damaanad ku sii daysay, waxaanay xukuntay in aan dib loogu celin Spain oo lagaga oogay dacwad falaagonimo ah.
Laakiin maxkamadaas oo ku taal magaalada woqooyiga ee Schleswig waxay sheegtay in ay ka fiirsan doonto oo ay go’aan ka gaadhi doonto in dib loogu celiyo Spain hadii lagu soo oogayo dacwado musuqmaasuq oo keli ah.
Mr Puigdemont waxa uu musaafuris ahaan ugu noolaa dalka Belgium tan iyo intii baarlamaanka Catalonia ay ku dhawaaqeen in Catalonia ay ka madaxbanaan tahay Spain inteeda kale.
Waxa dowladda Spain ay ku eedeeysay in lacagaha dadwaynaha uu si xun u isticmaalay isaga oo qabtay afti sanaddii aanu soo dhaafnay. Waxa uu booqasho ku joogay dalka Finland xilli mar labaad la soo saaray warqadda lagu soo xirayo.
Waxa uu si dhuumaaleysi ah uga soo baxay Filand ka hor inta aysan xukuumadda Filand xirin , balse waxaa lagu qabtay Jarmalka halkaasi oo lagu xidhay.